Ọrụ Ndịozi 25 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Ọrụ Ndịozi 25:1-27
25 Ya mere, mgbe Festọs malitesịrị ịchị ógbè ahụ,+ o si na Sesaria+ gbagoo Jeruselem mgbe ụbọchị atọ gasịrị; 2 ndị isi nchụàjà na ndị isi n’etiti ndị Juu kọọrọ ya akụkọ+ ọjọọ banyere Pọl. N’ihi ya, ha malitere ịrịọsi ya arịrịọ ike, 3 na-arịọ ka o gosi ha ihu ọma bụ́ nke ga-emegide nwoke ahụ, ya bụ, ka o zie ka a kpọọ ya ka ọ bịa Jeruselem, ebe ọ bụ na ha chechiri ya echechi+ ka ha wee gbuo ya n’okporo ụzọ. 4 Otú ọ dị, Festọs zara na a gaje ịkpọchi Pọl n’ime Sesaria, na ya onwe ya na-achọkwa ịgawa ebe ahụ n’oge na-adịghị anya. 5 Ọ sịrị, “n’ihi ya, ka ndị ike dị n’aka n’etiti unu soro m gbadaa ma bo ya ebubo,+ ma ọ bụrụ na e nwere ihe na-ekwesịghị ekwesị nwoke ahụ mere.” 6 Ya mere, mgbe ọ nọrọ ihe na-akarịghị ụbọchị asatọ ma ọ bụ iri n’etiti ha, ọ gbadara Sesaria, n’echi ya kwa, ọ nọdụrụ ala n’oche ikpe+ ma nye iwu ka a kpọbata Pọl. 7 Mgbe ọ garuru, ndị Juu, ndị si na Jeruselem gbadata, guzoro ya gburugburu, na-ebo ya ọtụtụ ebubo gbara ọkpụrụkpụ+ bụ́ ndị ha na-enweghị ike igosi ihe akaebe ha. 8 Ma Pọl zaara ọnụ ya, sị: “Ọ dịghị mmehie ọ bụla m mere megide Iwu ndị Juu ma ọ bụ megide ụlọ nsọ+ ma ọ bụ megide Siza.”+ 9 Ebe ọ bụ na Festọs chọrọ inweta ihu ọma+ ndị Juu, ọ zara Pọl, sị: “Ị̀ chọrọ ịga Jeruselem ka a nọrọ ebe ahụ kpee gị ikpe ihe ndị a n’ihu m?”+ 10 Ma Pọl sịrị: “Eguzo m n’ihu oche ikpe Siza,+ bụ́ ebe e kwesịrị ikpe m ikpe. Ọ dịghị ihe ọjọọ m mere ndị Juu,+ dị ka ị na-achọpụtakwa nnọọ nke ọma. 11 Ma ọ bụrụ na m bụ n’ezie onye na-eme ihe ọjọọ,+ ọ bụrụkwa na m mere ihe ọ bụla kwesịrị ọnwụ,+ adịghị m arịọ ka m ghara ịnwụ; ma ọ bụrụ na ọ dịghị otu n’ime ihe ndị ahụ ndị a na-ebo m ebubo ha nke bụ́ eziokwu, mmadụ ọ bụla agaghị enyefe m n’aka ha iji nweta ihu ọma. Ana m akpọku Siza!”+ 12 Mgbe Festọs na ndị ndụmọdụ ya gbachara izu, ọ zara, sị: “Ọ bụ Siza ka ị kpọkuru; ọ bụ Siza ka ị ga-agakwuru.” 13 Ma mgbe ụbọchị ụfọdụ gasịrị, Agrịpa bụ́ eze na Benis bịarutere Sesaria ileta Festọs ka ha kelee ya. 14 Ya mere, mgbe ha nọrọ ebe ahụ ruo ọtụtụ ụbọchị, Festọs tọgbọrọ okwu banyere Pọl n’ihu eze, sị: “E nwere otu nwoke Filiks hapụrụ n’ụlọ mkpọrọ, 15 mgbe m nọ na Jeruselem, ndị isi nchụàjà na ndị okenye ndị Juu kọrọ akụkọ+ ọjọọ banyere ya, na-arịọ ka a ma ya ikpe. 16 Ma azara m ha na ọ bụghị ụkpụrụ ndị Rom inyefe onye ọ bụla iji nweta ihu ọma tupu onye ahụ a na-ebo ebubo ezute ndị na-ebo ya ebubo+ ihu na ihu ma nweta ohere ikwu okwu iji zara ọnụ ya n’ihe metụtara mkpesa a na-eme. 17 Ya mere, mgbe ha zukọtara n’ebe a, egbughị m oge ọ bụla, kama n’ụbọchị sochiri ya, anọdụrụ m ala n’oche ikpe ma nye iwu ka a kpọbata nwoke ahụ. 18 Mgbe ndị boro ya ebubo guzoro, ọ dịghị ebubo ọ bụla ha boro+ ya banyere ihe ọjọọ ndị m chere na o mere. 19 Ọ bụ naanị na e nwere arụmụka ndị ha na ya nwere banyere ofufe nke ha na-efe+ ihe bụ́ chi na banyere otu onye a na-akpọ Jizọs nke nwụrụ anwụ, bụ́ onye Pọl nọ na-ekwusi ike na ọ dị ndụ.+ 20 Ya mere, ụka ha na-arụ banyere ihe ndị a gbagwojuru m anya, m wee jụọ ya ma ọ̀ ga-achọ ije Jeruselem ka a nọrọ ebe ahụ kpee ya ikpe ihe ndị a.+ 21 Ma mgbe Pọl rịọrọ+ ka a kpọchie ya ruo mgbe Onye Ukwu ga-ekpebi ya, m nyere iwu ka a kpọchie ya ruo mgbe m ga-ezigara ya Siza.” 22 Agrịpa wee sị Festọs: “Mụ onwe m ga-achọkwa ịnụ ihe nwoke ahụ nwere ikwu.”+ O wee sị ya, “Echi, ị ga-anụ ihe o nwere ikwu.” 23 Ya mere, n’echi ya, Agrịpa na Benis meere okomoko+ nke ukwuu bịa ma banye n’ụlọ ịnụrụ okwu, tinyere ndị ọchịagha na ndị ikom a ma ama n’obodo ahụ, mgbe Festọs nyekwara iwu, a kpọbatara Pọl. 24 Festọs wee sị: “Eze Agrịpa na unu niile ndị so anyị nọrọ n’ebe a, unu na-ahụ nwoke a bụ́ onye ìgwè ndị Juu dum rịọrọ m arịrịọ banyere ya ma na Jeruselem ma n’ebe a, na-eti mkpu na o kwesịkwaghị ịdị ndụ.+ 25 Ma achọpụtara m na o meghị ihe ọ bụla nke kwesịrị ọnwụ.+ Ya mere, mgbe nwoke a kpọkuru+ Onye Ukwu, ekpebiri m iziga ya. 26 Ma, ọ dịghị ihe doro anya m nwere idegara Onyenwe m banyere ya. N’ihi ya, akpọtara m ya n’ihu unu, karịsịa n’ihu gị, Eze Agrịpa, ka m wee nweta ihe m ga-ede mgbe e lebachara anya n’ikpe ya.+ 27 N’ihi na o yiri m ihe ezi uche na-adịghị na ya iziga onye mkpọrọ ma gharakwa ime ka a mata ebubo ndị a na-ebo ya.”
Ọrụ Ndịozi 25